ISP ကစာရင်း IPV6 မွေးစား speed စမ်းသပ် ရောမ NUMERIC ခုနှစ်တွင်သင့် IP IPv4 နှင့် IPv6 PHP ကို ​​Subnet Calculator ကို geolocation
တစ်ဦးက VPN ကိုဆိုတာဘာလဲတစ်ဦးက VLAN ဆိုတာဘာလဲလူမှုအင်ဂျင်နီယာတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန် 8 နည်းလမ်းများတစ်ခုကလုပ်ငန်းကြိုးမဲ့ကွန်ယက် Secure စေရန်တစ်ဦးက VPN ကိုအသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးက Linksys WRT54G ကြိုးမဲ့, G Broadband Router လုံခြုံအောင်
ဘာသာစကားအဂၤလိပ္အဘိဓါန် Arabicတရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ)ပြင်သစ်ဂျာမန်ဟိန်အီတလီဂျပန်ပေါ်တူဂီရုရွားစပိန္ဟီဘရူးအဘိဓါန် Armenian
တစ်ဦးက VPN ကိုဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦးက VLAN ဆိုတာဘာလဲ
လူမှုအင်ဂျင်နီယာတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန် 8 နည်းလမ်းများ
တစ်ခုကလုပ်ငန်းကြိုးမဲ့ကွန်ယက် Secure စေရန်တစ်ဦးက VPN ကိုအသုံးပြုခြင်း
တစ်ဦးက Linksys WRT54G ကြိုးမဲ့, G Broadband Router လုံခြုံအောင်
လုံခြုံရေးနည်းလမ်းများ (BGP) ပါနယ်စပ်ရေးရာ Gateway မှာပရိုတိုကော
သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်ကို Safe ဖြစ်ပါတယ်
သင်က 8 လွယ်ကူခြေလှမ်းများခုနှစ်တွင် IP ကို ​​subnet အကြောင်းသိလိုအရာအားလုံးကို
အဘယ်အရာကို Ip ကျွန်မရဲ့ Ip
အဘယ်သို့ငါက Windows 10 တွင်အကြှနျုပျ၏ IP address ကိုရှာပါပါနဲ့
သင့် IP Address ကိုရှာပါရန်မည်သို့
တစ်ဦးက IP address ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါဝေါဟာရကို "အိုင်ပီကျယ်ပြန့်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်များဆက်စပ်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အိုင်ပီအင်တာနက်ပရိုတိုကောကိုဆိုလိုတာပါနှင့်က data တွေကို packets တွေကိုကွန်ယက်မှတဆင့်လွှဲပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထူးခြားတစ်ဦးချင်းစီကွန်ရက်ကကိုဖေါ်ထုတ်ရန်စွမ်းရည်နှင့်ငါတို့ကိုပေးသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အတွက် device ကို။ ကျွန်တော်တို့သည်အိုင်ပီများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြတ်သန်းသွားက IP ကိုများနှင့်အခြားဆက်စပ်အသုံးအနှုန်းများအမျိုးအစားများနှင့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ဦးလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းရဲ့အဘယ်ကြောင့်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ IP protocol ကိုခေါ်စည်းမျဉ်းများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ protocol များကွန်ယက်အလုပ်နှင့်ကွန်ယက်ကျော် data တွေကို packets တွေကိုလွှဲပြောင်းပေါ်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အညီအချို့သောစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်။ ဒီခေတ်မှာတော့အဲဒီမှာကွန်ရက်ကပစ္စည်းတွေအများအပြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့နည်းပညာ, operating system မြား, သူတို့ကိုအသုံးပြုဖို့ရာဗိသုကာရှိပါတယ် သူတို့ရဲ့ tools တွေကိုတည်ဆောက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကွန်ယက်ကိုကျော်ပြေးရသောအခါ, သူတို့က Internet Protocol (IP) ကထိန်းသိမ်းထားသည့်အချို့သောစံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်မှ။ သူတို့ရဲ့ packets တွေကိုသူတို့ရဲ့ IP address အပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံး devices တွေကိုလမ်းကြောင်း။
IP Address ကိုနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှု
နည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့ IP လိပ်စာကိုကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ device ကိုမှတာဝန်ပေးအပ်ထူးခြားတဲ့ 32-bit မှာအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်၏လိပ်စာ IP လိပ်စာကိုကိရိယာများအတွက်ထူးခြားသောဖော်ထုတ်ခြင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်အလားတူလမ်းအတွက်တိကျသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှ။ ဒီလိပ်စာအသုံးပြုခြင်း, ကိရိယာဒေတာ packets တွေကိုများ၏ပေးပို့သူနဲ့လက်ခံသူနှစ်ဦးစလုံး၏လိပ်စာနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ။ တစ်ဦးကကွန်ယက်ကိုဒေတာ packet ကိုရဲ့ IP based ကွန်ယက်ကိုကျော်သတင်းအချက်အလက်နှင့် user data ကိုထိန်းချုပ်သယ်ဆောင်အချက်အလက်များ၏တစ်ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာတစျခုကိရိယာမှအခြားကိရိယာကိုစလှေတျသောအခါ, သင့်ရဲ့ PC ဟာသူ့ရဲ့ IP address ကိုတွေ့ပါမှတစ်ဦး hostname ကိုတက်ကြည့်ဖို့ DNS Server ကိုအသုံးပြုသည်။ IP လိပ်စာမပါဘဲ, ကိရိယာကွန်ယက်ကျော်ဖော်ထုတ်မည်မဟုတ်ပါနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့မရပါဘူး။ သို့သော်ဤစက်ကိရိယာနှင့်ကွန်ယက်သည်နှင့်အညီအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင့် PC ကိုတစ်ခုထက် ပို. IP လိပ်စာများရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ LAN နှင့်အင်တာနက်အခြားများအတွက်တစ်ခုမှာ။ ဤရွေ့ကား IP လိပ်စာများနောက်ထပ်နှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားထားပါသည်:
static IP Address ကို
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်စားပြုသကဲ့သို့, ငြိမ် IP လိပ်စာများသူတို့တစ်တွေကွန်ယက်ကိုကျော်ကိရိယာမှတာဝန်ပေးအပ်ကြသည်ကိုတစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲပစ်ဘယ်တော့မှထားတဲ့ IP လိပ်စာများအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ static IP လိပ်စာများဒီတော့စျေးကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဝှက်ထားချင်သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများမှပွင့်လင်းကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်အသေးစားဝက်ဘ်, ဂိမ်းကစားခြင်း, အီးမေးလ်ဆာဗာများအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။
dynamic IP Address ကို
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Dynamic IP လိပ်စာများ device ကိုကွန်ယက်သို့တွင်းသို့အခါတိုင်းပြောင်းလဲထားတဲ့သူတွေကို IP လိပ်စာများဖြစ်ကြသည်။ ကငြိမ်အိုင်ပီထက်ပိုမိုလုံခြုံသည်နှင့်အတူတူပင်မတည်မနေပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုပါအကြီးစားအဖွဲ့အစည်းများအများအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေသော IP လိပ်စာများသုံးတတ်၏ ဤအရပ်မှတည်နေရာခြေရာခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပိုကောင်းတဲ့အရာ Dynamic IP ကို ​​vs static IP ကို?
အစောပိုင်းကဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ကွန်ယက်ပတ်ဝန်းကျင်၏သဘောသဘာဝကိုအသုံးပြုရပါမည်သည့် IP ကိုအမျိုးအစား, ဆုံးဖြတ်သည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်မစိုးရိမ်ကြောင်းနှင့်ကွန်ယက်မှတဆင့်ခြေရာခံခံရခြင်းမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ပုန်းအောင်း၏မလိုအပ်လည်းမရှိလျှင်, ငြိမ် IP ကိုသင်တို့အဘို့အချောအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဝဘ်ကျော်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လုံခြုံကွန်ရက်အသွားအလာပတ်ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့်သွားချင်လျှင်မူကား, ထို့နောက် Dynamic IP ကိုသင်တို့အဘို့ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်း, မေးလ်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွေအခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြောင်းလဲနေသော IP အားဖြင့်အထဲကယူသွားတတ်၏, FTP, ဆာဗာများ, နှင့်အသံဖြင့် Static IP ကိုကဆောင်ရွက်ကြသည်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ခေါ်ဆိုသည်။ IPV4 နှင့် IPV6 တူသောစံအစီအစဉ်များကွန်ယက် device များအတွက် IP လိပ်စာများကိုထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ ဤရွေ့ကား IP ကိုဗားရှင်းကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်နေကြသည်။
IPV4 လိပ်စာ (အင်တာနက်ပရိုတိုကောဗားရှင်း 4)
IPV4 (အင်တာနက်ပရိုတိုကောဗားရှင်း 4) ကွန်ရက်တစ်ခုဖြတ်ပြီးပစ္စည်းများမှ assign မှလိပ်စာများကိုထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ Internet Protocol (IP) ၏စတုတ္ထဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ IPV4 အင်တာနက်ရန် devices တွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့ 32-bit မှာလိပ်စာဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ 32-bit မှာလိပ်စာနီးပါး4ဘီလီယံခန့်လိပ်စာများကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်ဆိုလိုသည်။ စာရင်းအင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ, Laptop, ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့စမတ်ဖုန်းအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန် IPV4 ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အင်တာနက်ထုတ်ကုန်၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတိုးတက်မှုနှုန်းအတူ IPV4 အပေါငျးတို့သ devices တွေကိုဖြေရှင်းဖို့လုံလောက်တဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖော်ပြသည်။ ဒီကန့်သတ်ကိုကျော်လွှားရန်, အင်တာနက်ပရိုတိုကောပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့် IPV6 လိပ်စာများကို generate ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်ဗားရှင်းသစ်ခံခဲ့ရသည်။
IPV6 လိပ်စာ (အင်တာနက်ပရိုတိုကောဗားရှင်း 6)
IPV6 လိပ်စာ (အင်တာနက်ပရိုတိုကောဗားရှင်း 6) ပိုပြီးအင်တာနက်လိပ်စာများဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းဖို့အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိအသစ်တစ်ခုကိုအင်တာနက် addressing ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ IPV6 IPV6 တစ်ပြုပြင်ထားသောပုံစံနှင့်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အရေအတွက်အဖြစ်ဒေတာအသွားအလာမှတဆင့်ကူးစက်သောခွင့်ပြုပါတယ်။ IPV6 လိပ်စာကိုလည်း IPng (အင်တာနက် protocol ကိုလာမယ့်မျိုးဆက်) ဟုခေါ်တွင်သည်ချထားလျက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဘယ်သူမျှမ DHCP နှင့် NAT, of Service ကိုစစ်မှန်သောအရည်အသွေး (QoS) အဖြစ် IPV4 ကျော် IPV6 အချို့အားသာချက်များရှိပါသည်။
TCP / IP ကဘာလဲ
TCP / IP (Transmission Control Protocol ကို / အင်တာနက်ပရိုတိုကော) ကအင်တာနက်များ၏နောက်ခံ protocol တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဆက်သွယ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်နှင့်မျှမ packets တွေကိုအရှုံးလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေသည်။ packets တွေကို၏ကျရှုံးခြင်း၏အမှု၌ကချိတ်ဆက်မှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဒေတာ retransmits ။ သတင်းစကားပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်၏မျက်နှာကို ထောက်. ချိတ်ဆက်နှစ်ဦးကိုကွန်ပျူတာများ, TCP / IP ကိုအစီအစဉ်၏တစ်ဦးမိတ္တူနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။ TCP / IP နှစ်ခုအလွှာရှိပါတယ်: အဆင့်မြင့်အလွှာသည် TCP သည်နှင့်သေးငယ်အစိတ်အပိုင်းများထဲသို့ဒေတာကိုတပ်ဆင်နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင် IP ကို ​​layer သည် packet ကို၏လိပ်စာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့်အသေချာစေသည်နေချိန်မှာမူရင်းဒေတာသို့အပေါငျးတို့သအပိုင်းပိုင်း reassembling အတွက်တာဝန်ရှိသည် ဒေတာလက်ျာဘက်ဦးတည်ရာသို့ပို့သည်။ ကြောင့်ဒီ protocol ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှ, ကအသုံးပြုသည်။
UDP ကို ​​/ အိုင်ပီ
UDP ကို ​​(အသုံးပြုသူ Datagram Protocol) ကို TCP တစ် protocol ကိုအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပြီးအမှားအယွင်းများထိုသို့စစ်ဆေးနေခြင်းမရှိဘဲဒေတာထုတ်လွှင့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာယုံကြည်စိတ်ချရအပေါ်လြှော့ပေါ့နှင့် packets တွေကိုများ၏တစ်စက်ပါစေ, ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းအောင်းနေချိန်နှုန်းကိုပေးသည်။ ကြောင့်ဤကြောင့်ဂိမ်းကစားနှင့်အွန်လိုင်း streaming များအသုံးပြုသည်။
အင်တာနက်ပရိုတိုကောများနှင့်အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာကွန်ပျူတာကွန်ရက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအကြောင်းအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထားတဲ့လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအပေါက်အသုံးဝင်သောအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့ဖြစ်၏။ dynamic IP နဲ့ Static IP ကိုပတ်ဝန်းကျင်အရသိရသည်ရှေးခယျြထားနေကြပြီး, ဒေတာ packets တွေကိုဂီယာ၏ mode ကို TCP / IP သို့မဟုတ် UDP / IP ကို ​​module တွေသတ်မှတ်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ ip ဘာသာစကားအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါ! မြင် MyIp မူလစာမျက်နှာဘာသာစကားများ